Jona 12, 2018 Admin
$20M Etera nijirika avy zara raha voaendrika Ethereum fampiharana
Araka ny aterineto Shinoa fiarovana mafy Qihoo 360 Netlab, mpijirika no nangalatra $20 tapitrisa ao amin'ny Etera amin'ny zara raha voaendrika Ethereum rigs fitrandrahana sy ny antoko fahatelo-rindrambaiko. Ny manam-pahaizana tao amin'ny mafy hoe fanafihana mikendry ny tserasera unsecured Ethereum nodes ao amin'ny Internet.
Crypto orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany mba ho voalaza ao amin'ny London Stock Exchange
Ny orinasa vaovao izay mamela ny olona amin'ny alalan'ny finday cryptocurrencies ahy sy ny ordinatera mampiasa ny tolotra famandrihana dia nanambara lamina lisitra ao amin'ny London Stock Exchange, voalohany ho an'ny fifanakalozana.
Argo Blockchain nilaza fa manantena ny hanangana £ 20 tapitrisa ao amin'ny lisitra, ary manantena ny ho tombany amin'ny manodidina £ 40 tapitrisa. Argo milaza izany dia ho voalohany orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany crypto hiaraka London ny tsenam-.
Asa ara-bola ny orinasa mandany $ 1.7B amin'ny blockchain
Ny asa ara-bola ny orinasa mandany $1.7 lavitrisa isan-taona ny amin'ny nizara boky firaketana, araka ny mpikaroka Greenwich Associates.
Ny fanadihadiana dia mampiseho ny teti-bola lany amin'ny blockchain nitombo 67% taona lasa, amin'ny iray amin'ny 10 banky sy ny orinasa hafa tatitra fandaniana mihoatra noho $10 tapitrisa. Toy izany koa, ny isan'ny mpiasa miasa amin'ny hetsika blockchain avo roa heny tamin'ny taon-dasa.
Richard Johnson, filoha lefitry Greenwich Associates Structure Market sy ny Teknolojia nanao hoe: mihoatra ny telo ampahefatry ny tetikasa izay amin'izao fotoana izao eo ambany fampandrosoana dia tokony handeha mivantana ao anatin'ny roa taona.
CFTC Mitaky crypto varotra fifanakalozana mba hizara antontan-kevitra
Ny hoavy entam-barotra Trading US Commission (CFTC) dia nangataka vola crypto maro fifanakalozana – Bitstamp, Coinbase, itBit sy Kraken – fifanakalozana ara-barotra tahirin-kevitra mba hamaritana raha fanodinkodinana dia mahakasika ny crypto tsena.
Raha ny fanadihadiana ny CFTC dia mbola Tamin'ny taona Vao nanomboka, dia mampiseho fa manana lehibe dalàna liana amin'ny fametrahana crypto eo ambany ny fanaraha-mason'ny fifanakalozana. Manokana, ny CFTC dia fanadihadiana na eny an-tsena dia vokatry ny varotra fanao toy ny mpivarotra spoofing na miditra ao an-bidy lehibe solon mitombo.
Koreana banky blockchain kasainao hampiasaina mba hanamarina ny mpanjifa ID
Nisy vondrona banky-pirenena ao Korea Atsimo mikasa ny hakodian'ny olona avy blockchain-monina iray ID rafitra fanamarinana ho an'ny banky ara-barotra ao an-toerana.
Ny rafitra vaovao, BankSign, hanatitra banky eo an-toerana ny safidy mba hanoloana ny rafitra efa misy ID fanamarinana izay efa teo amin'ny toerana nandritra ny taona maro ao Korea Atsimo.
Ny vaovao ID blockchain tolotra, dia ho hita izay ho an'ny aterineto sy ny finday banky, manamarika iray amin'ireo ezaka voalohany amin'ny banky ara-barotra ao amin'ny Korea Atsimo mba ho fampiharana azo blockchain ankapobeny mpanjifa.
$212M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Maisel hoy i:
Jolay 19, 2018 amin'ny 5:14 PM
Riley Doig hoy i:
Aogositra 2, 2018 amin'ny 8:16 AM
Dusen hoy i:
Oktobra 23, 2018 amin'ny 6:13 AM
Eckhard hoy i:
Oktobra 23, 2018 amin'ny 6:17 AM